I-clearVoice: Ipulatifomu yokuqukethwe kokuhamba komsebenzi kokuhlela, ukuqasha, ukuphatha nokushicilela | Martech Zone
Imvamisa kukhona ukweqisa okubili embonini yeMartech, amafu ahlanganisa konke, nezinkundla ezizimele zodwa. Kepha okunye ukuthuthuka okuthembisayo engikubonayo kungamapulatifomu anganika amandla ukumaketha okudala izindlela futhi wehlise isidingo sokudluliswa kwedatha noma ukuhlanganiswa okubizayo.
Isidingo sokuqukethwe kwe-premium ukwakha igunya, ukuthola igunya ezinjini zokusesha, futhi kukhuthaza ukuhlanganyela ezinkundleni zokuxhumana, konke kuyanda. Izidingo kubakhangisi yilezi okwandayo ngenkathi izinsizakusebenza ziyisicaba noma ziyancishiswa. Futhi abathengisi bamane abahambisani ngaphandle kwethuluzi lamathuluzi elifanele.
I-ClearVoice: Ukuhamba komsebenzi okulula. Ama-freelancers angcono. Kubuya okukhulu.
I-ClearVoice isungule isixazululo sabathengisi bokuqukethwe esihlukile. Kusuka ku- Ukuhlela isu lakho lokuqukethwe ukuze ukuthola nokuqasha ithalente ukubhala nokuhlela lelo qhinga, ukuze ukuphatha nokuhlela ikhalenda lakho lokuqukethwe, ngisho ukushicilela okuqukethwe kwakho ngokuhlanganiswa kohlelo lokuphathwa kokuqukethwe - i-ClearVoice oyimbozile.
I-ClearVoice inika amandla abathengisi ukuhlela, ukuqasha, ukuphatha nokusabalalisa okuqukethwe maphakathi nenkundla yabo.
Ukuhlelwa kokuqukethwe nemibono
Sesha kusuka ku-database ebanzi kunazo zonke yama-athikili nezindaba ezihamba phambili. Hlaziya ukusebenza kokuqukethwe, ithegi imibono, dala imiqondo bese shesha ikhalenda lakho lokuhlela.
Thola, Qasha, futhi ukhokhele ama-Freelancers wokuqukethwe
Yonga isikhathi bese uvumela isoftware ye-ClearVoice yokumaketha okuqukethwe ikuqondanise ne-ephelele ababhali abazimele nabasungula izinto. Mane unikeze imininingwane yesabelo futhi ubuchwepheshe bethu busiza amaphrofayli wombhali ongakhetha kuwo. Ama-freelancers ayizintandokazi futhi wakhe iqembu eliphelele.
Ukuphathwa Komkhankaso Wokuqukethwe nokugeleza komsebenzi
Phatha okuqukethwe kwakho, amaqembu wangaphakathi nangaphandle, nemikhankaso enamathuluzi wokuhlela asebenzisanayo. Hlala ulandelela imihlahlandlela yomkhiqizo, ama-personas, kanye nezinkokhelo ezenzakalelayo ze-freelancer.
Ukusatshalaliswa kokuqukethwe nokushicilelwa
Phusha okuqukethwe ngqo kwi-WordPress, i-HubSpot kanye nezinye izinhlelo ezinkulu zokuphathwa kokuqukethwe nge-API yethu efinyeleleka. Xhuma ne- Izixazululo ze-ClearVoice ukwabelana ngokuqukethwe kwakho ngemidiya eholile nekhokhelwayo.
Cela i-ClearVoice Demo
Tags: sishayeukumaketha okudalai-clearvoiceukuthuthukiswa kokuqukethweukukhiqizwa kokuqukethwethola ababhali bokuqukethwefreelancersindawoWordPressukuqhutshwa komsebenzi